TeamViewer 11 dị maka Mac | Esi m mac
Jesus Arjona Montalvo | | Ngwa ndị ọzọ maka Mac, Mmemme Mac, ọtụtụ
Anyị niile maara ma ọ bụ kwesịrị ịma ihe ọ bụ TeamViewer, ma anyị ga-enye gị nchịkọta nke ihe mmemme kachasị mma maka remotely ịchịkwa kọmputa ọ bụla ma ọ bụ Mac na Internetntanetị, ma ọ bụ iji nyere enyi gị aka, ma ọ bụ nyere aka na ụlọ ọrụ ọ bụla. Anyị na-ekwu na ha na-eji ya ọzọ nke 200 ọtụtụ nde ndị ọrụ, n'ihi na ngwá ọrụ ahụ kwesịrị ya ma baa ezigbo uru.
Ọnụ ọgụgụ ahụ dị njọ mgbe anyị kwuru na ha adịlarị Ndị ọrụ 200.000.000 nke gafere Mba 200 na ha nwere ike ịrụ ọrụ na TeamViewer. Ọ bụ ezigbo ikpo okwu iji nweta kọmputa ọzọ. Iji wepu obi abụọ gị, ọ bụ nke ikpeazụ na ụdị azụmaahịa, ọ bụ ezie na beta pụtara na onyonyo ahụ egosiri.
Enwere free version ma obu nke ugwo, pro pro nke TeamViewer nwere ike ịmepụta ma nabata njikọ. Ya mere na ị nwere ike ịmekọrịta nkasi obi na uche abụọ.
Versiondị nke oS X ọ tọ dụdu ọwhu dụ ntanụ-a, dụkota oke ugvu 23.9 mb (Anyị na-ekwu okwu banyere .dgm), nke na nwụnye-eburu na ọ ga-arịọ dị nnọọ nta ohere na gị Mac. Ọhụrụ atụmatụ awade atọ ọhụrụ atụmatụ, awade ọhụrụ otu mma ọrụ, mmelite dị na arụ ọrụ, a mkparịta ụka njedebe na njedebe zoro ezo ebe ọ bụla na ụdị ngwaọrụ niile a na-eji (iOS, Android, OS X, Windows, wdg). Ọ dịkwa nnọọ mfe na njikọta maka Linux enweghị nyocha, na-arụkọ ọrụ na Chrome OS ma na-enye ohere ịnweta ngwaọrụ gam akporo.
Iji nwalee arụ ọrụ, Ndị ọrụ azụmahịa nwere ike iji nbudata nke anyị tinyere na njedebe nke njikọ a. Iji budata ụdị nke kachasị ọhụrụ pịa ihe ndị a njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ngwa ndị ọzọ maka Mac » TeamViewer 11 dị maka Mac ugbu a
Daalụ. M wụnyere Teamviewer v11 na Snow agụ owuru. Ihe zuru ezu bụ na mgbe m chọrọ ịbanye na otu ọzọ site na mac, ana m enweta njehie na-esonụ: «Onye gị na ya na-eji ụdị ọhụụ nke ndị na-ekiri otu egwuregwu. Kwesịrị imelite TeamViewer iji mepụta njikọ »… lelee ụdị arụnyere na ọ na-ekwu Version: 9.0.43731. Akwụsịrị m ya ma budata nsụgharị 11 ọzọ na-eche na m mehiere, mana ọbụlagodi na nbudata v11, ọ ka na-ekwu na ọ bụ mbipute 9. Ọ dị onye nwere otu nsogbu ahụ?
Applọ Ahịa Mac adịghị agbanwe agbanwe na Bohemian Coding na-ewepu ngwa Sketch 3 ya na ụlọ ahịa ahụ